Talo muhiim ah oo ku socota muslimiinta Ramadaanka bilaabaya - Muraayad
Maalinta Talaadada ah ee bari ayaa la rajeynayaa inay bilaabato bisha barakeysan ee Ramadan haddii bisha la arko caawa.
Sheekh Mufti Menk oo ka mid ah aqoonyahannada muslimiinta ugu caansan caalamka ayaa farriin usoo diray dadka gudanaya waajibaadka diimeed ee soonka, oo ka mid ah shanta tiir ee islaamka.
‘Haddii aadan wanaagga badineynin xumaanta ha badinin’
Muuqaal uu soo galiyay bartiisa Youtube-ka ayuu dadka muslimiinta ah uga codsaday in ay haddiiba aysan ficillo badan oo dhanka wanaagga ah sameyn karin ay iska ilaaliyaan inay xumaan sameeyaan.
“Walaalaheyga wiilasha iyo gabadhaha ee muslimiinta ahoow, haddii aydaan sameyn karin wax badan oo wanaag ah inta lagu jiro Ramadaanka, ugu yaraan xumaato ha sameynina,” ayuu ku billaabay farriintiisa.
‘Haddii aadan cibaadada badin karin dambiga iska ilaali’
Sidoo kale wuxuu intaas raaciyay: “Haddii aydaan sameyn karin cibaado badan iyo ficillo Alle lagu caabudayo, waxa ugu yar ee lagaa rabo waa in aadan dambi ku sameynin Ramadaanka dhexdiisa. Taasina micnaheedu ma aha inaan dambi sameyn karto bilaha aan ramadaanka ahayn laakiin waa in aad loo feejignaado Ramadaanka markaasna waxaa abaalmarin loo helayaa in uu Alle qofka ka ilaaliyo dambiyada xitaa marka aysan Ramadaan ahayn.”
Talooyinka uu Muft Menk noo soo diray waxaa kale oo ka mid ah in qof walba oo qorsheynaya ficil wanaagsan uu durbadiiba ku dhaqaaqo fulintiisa qof walbana uusan ku fikirin wax qorshe ah oo ku saabsan inuu dambi sameeyo.
Previous article4 arrimood oo muhiim kuu ah inta ay socoto bisha Ramadaan
Next articleArrimo ku saabsan jirka dadka oo aysan ogeyn khubarada sayniska